Double Digit Kurasikirwa Tsvaira Crypto Chakanaka Market - Blockchain News
Kukadzi 2, 2018 arun
Double Digit Kurasikirwa Tsvaira Crypto Chakanaka Market
The misika cryptocurrency muri gungwa dzvuku nhasi, zvose pamusoro 10 cryptocurrencies kubudikidza musika chivharo kushuma kaviri digit kubva muzana Nokurasikirwa yokupedzisira 24 maawa.
Bitcoin aregedza 16 % pamusoro chete nguva kusvika 10-vhiki neyakaoma pazasi $8,000 uye hungakanganisika yakaipisisa kurasikirwa pavhiki (kupfuurisa 25 %) kubva April 2013. The cryptocurrency akatambura 30 muzana donhwe muna January uye pasi 45 % uri gore kwokuwirirana hwaro.
Ethereum kuti Eteri chiratidzo iri pasi 28 %. The cryptocurrency aringa nekaupenyu vakashinga ambotaurwa svondo rino, anonzi nokuda zvechechi guta Rwako uye chisarudzo Venezuela kuti presale Petro cryptocurrency pamusoro ethereum papuratifomu. zvisinei, nzombe kutaba anotarira kuti simba uye paEti akanga pakupedzisira kuonekwa vanotengesa kumativi $785.
Zvichakadaro, Ripple kwakaita XRP chiratidzo pokutanga wechitatu pandandanda vakundwa ane 35 muzana donhwe. The cryptocurrency zvino tawira $0.635 - yakaderera pamwero wayo kubva Dec. 15. Inotevera kutanga zvakaipa XRP kusvikira gore, aine 49 muzana kuwa munguva January.
uchitikurudzira, zvachose musika capitalization pamusoro cryptocurrencies zvose zvakatorwa pamwe aregedza kupfuura $100 bhiriyoni.
Uyezve pasi pachati, achirova rova ​​akanaka kucherechedza pakati serima uye okuparadzwa, Chiratidzo ane wakakombama goridhe anonzi DigixDAO (DGD) anomira kubuda pashure pokunge neawakatumirwa 30 muzana achawana.
Bitcoin ATM samambure ...
Previous Post:Blockchain Observatory uye Forum Ichaunza EU kuti "Shongwe" pamusoro Blockchain Tech
Next Post:Canada yokutanga Blockchain ETF anotendwa regulators